But first i have to - Inglés - Birmano Traducción y ejemplos
Usted buscó: but first i have to ask : (Inglés - Birmano)
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်/ကျွန်မမှာ အသက်ရှူရခက်တယ်
သင်တို့မသိသော စားစရာသည် ငါ့၌ရှိသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
ထာဝရဘုရားက၊ သင်တောင်းပန်သည်အတိုင်း ငါလွှတ်၏။
သင်တို့သည် သတိပြုကြလော့။ ထိုအကြောင်းအရာရှိသမျှကို ငါပြောနှင့်ပြီ။
တစ်ခါတစ်ခါ ကျွန်တော်/ကျွန်မ မှာ ရင်ဘတ်အောင့်တယ်
ကျွန်တော်/ကျွန်မမှာ ဟေးဖီဗာ လည်း ရှိတယ်
ကျွန်တော်/ကျွန်မ အသက်ရှူရတာလည်း နည်းနည်း ခက်တယ်
သက်သေခံတော်မူချက်တို့၌ မှီဝဲပါပြီ။ အို ထာဝရဘုရား၊ အရှက်ကွဲစေတော်မမူပါနှင့်။
ua: i have always photographed folk rituals.
အူမီဒါ : ရှေးရိုးရာဓလေ့တွေအကြောင်းကို ကျွန်မအမြဲတမ်း ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးနေခဲ့တာပါ။
but i am saddened that i have becomeavictim twice over.
ပထမအကြိမ်က ကျွန်ုပ် မိခင်အား ဆုံးရှုံရသည့်အချိန်၊
to addanew account, you first have to installabackend for each protocol you want to use.
အကောင့်သစ် ပေါင်းထည့်ရန် ပရိုတိုကောတစ်ခုစီအတွက် backend များ ထည့်သွင်းပေးပါ
well when i have that pain in my chest
ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်/ကျွန်မမှာ ရင်ဘတ်နာတာ ရှိတယ်
ထိုကြောင့် သင်တို့ရှိရာသို့ ငါလာရသော အခွင့် မရှိ။ အဆီးအတားများလှပြီ။
ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကိုသင်တို့အား အကုန်အစင် ဟောပြောပြသခြင်းအမှုကို ငါသည်မလွှဲ မရှောင်ဘဲပြုခဲ့ပြီ။
ငါ၏သားသမီးတို့သည် သမ္မာတရား၌ ကျင်လည်သည်ကို ငါကြား၍ ဝမ်းမြောက်ခြင်းထက် သာ၍ ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိ။
မတရားသောသူ အစည်းအဝေးတို့သည် အကျွန်ုပ်ကိုဝိုင်းကြသော်လည်း၊ အကျွန်ုပ်သည် တရား တော်ကို မမေ့မလျော့ပါ။
i have asked cabinet to discuss section 114a of the evidence act 1950.
၁၉၅၀ သက်သေခံဥပဒေရဲ့ ပုဒ်မ ၁⁠၁၄(က)ကို ဆွေးနွေးဖို့ အစိုးရအဖွဲ့ကို ပြောပြီးပါပြီ။
separabitis (Latín>Noruego)labor improbus omnia vincit (Latín>Inglés)reglementarea (Rumano>Islandés)levin (Inglés>Ruso)sad ikavi? (Georgiano>Ruso)hindi madaling magsawa (Inglés>Tagalo)joka (Italiano>Alemán)para maisama (Tagalo>Inglés)knuffels met geluid (Neerlandés>Francés)hidroclorofluorocarburi (Rumano>Inglés)nag alala ako sayo (Tagalo>Inglés)morbid phenomenon (Inglés>Tagalo)glutinous rice (Inglés>Tagalo)salire sulla collina (Italiano>Francés)mi casa es tu casa (Español>Francés)invalidita` civile (Italiano>Inglés)pošiljatelja (Croata>Húngaro)Ð²Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€Ð³ (Ucraniano>Alemán)Ø¬Ø´Ù† Ø¯Ø±Ùˆ (Persa>Inglés)майского (Ruso>Inglés)requiem (Latín>Tailandés)приемочные (Ruso>Inglés)ano ang tagalog ng explore (Danés>Tagalo)pai traductor (Quechua>Español)nag tanim sila ng bulaklak sa play grond (Tagalo>Inglés)